Allah no anaran' ny Andriamanitra tokana ao amin' ny finoana silamo. Amin' ny Silamo dia i Allah no mpahary izao rehetra izao (na ‘âlam), ka maro ny teny amaritan' ny boky Kor'any ny toetrany, toy ny hoe "mahery", "mahay", "be indra fo", sns. Anarana miisa 99 no omen' ny fivavahana silamo an' ity Andriamanitra tokana ity, izay atao hoe "anaran' Andriamanitra tsara indrindra".
Hatramin' ny taonjato faha-20 dia nalain' ny Silamo ho azy ireo samirery ny anaran' i Allah. Ohatra amin' izany ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana maley tamin' ny taona 2009 izay mandrara ny fampiasan' ny Kristiana maley io anarana io, izay tsy nampiasain' ny fivavahana tokana, araka ny tantara, fa nampiasain' ny fivavahana maro. Efa nisy teo amin' ny tontolo arabo talohan' ny fiorenan' ny fivavahana silamo, izay mino andriamanitra maro (pôliteista), mantsy ny andriamanitra mpamorona nantsoina hoe Allah, satria io teny io dia midika fotsiny hoe "Andriamanitra".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Allah&oldid=1038804"
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 11:48 ity pejy ity.